पत्रकार सम्मेलनमा के भने भारत र नेपालका प्रशिक्षक तथा कप्तानले? « AayoMail
पत्रकार सम्मेलनमा के भने भारत र नेपालका प्रशिक्षक तथा कप्तानले?
2021,1 September, 2:22 pm
काठमाडौं – भारतविरुद्धको दुई मैत्रीपूर्ण खेलअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले आफूहरु बराबरीका लागि नभई जितका लागि खेल्ने बताएका छन्। उनले भारत बलियो टोली भए पनि आफूहरुले दुवै खेलमा जित निकाल्ने बताए।
उनले विगतको रेकर्ड नहेरी रिजल्टका लागि खेल्ने बताए। ‘हामी वीर गोर्खाली हौं। हाम्रो उद्देश्य जितमात्र हो।’, उनले भने।
यस्तै, नेपालका कप्तान किरण चेम्जोङले पनि भारतविरुद्ध खेल्न सहज नहुने बताए। आफूहरुले केही महिनायता कडा मिहिनेत गरेका कारण नतिजा भने सकरात्मक आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
यस्तै, भारतीय कप्तान सुनिल क्षेत्रीले नेपालविरुद्ध खेल्न सधैं कठिन हुने बताए। उनले नेपालले सँधै आफ्नो घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट खेल पस्किने गरेको बताए।
‘मैले यसअघि नेपालविरुद्ध खेल्दा टिममा रहेका धेरै खेलाडीहरु अहिले छैनन्। तर, नेपालविरुद्ध खेल्न सँधै कठिन हुने गर्दछ’, उनले भने।
यस्तै, भारतीय टिमका मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टिमिकले आफ्ना खेलाडीले निकै मिहिनेत गरेको भन्दै राम्रो नतिजाको अपेक्षा राखेको बताए। तर, पछिल्लो समय नेपालले डिफेन्समा सुधार गरेको र राम्रो फुटबल खेलिरहेकोले कमजोर नआकेको बताए।